आइसीइको छापाः २५ सय नेपाली टार्गेटमा ? – Durbin Nepal News
आइसीइको छापाः २५ सय नेपाली टार्गेटमा ? अर्को हप्तादेखि आइसीइको गतिविधि तिब्र हुने
जाङबु शेर्पा	२६ असार २०७६, बिहीबार २३:३३
जाङ्बु शेर्पा, दूरबिन नेपाल, जुलाई ११
आइसीइले आइतबारदेखि देशव्यापीरुपमा धरपकडलाई तिब्र पार्ने जनाएको छ । कागजपत्र विहिन र अदालतले डिपोर्टेसनको आदेश दिइसकेकाहरु मुख्य निशानामा पर्ने आइसीइको छापामा दुई हजार पांच सय जति नेपालीहरुपनि पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । अमेरिकी अदालतले झण्डै २५ सय नेपालीहरुलाई अमेरिका छोड्न आदेश दिइसकेको अनुमान गरिएको छ । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार अध्यागमन अदालतबाट देश निकालाको आदेश पाएकाहरु र सिमापारीबाट अवैध रुपमा अमेरिका छिरेका झण्डै दश लाख आप्रवासीहरु आइसीइको निशानामा पर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ । आप्रवासीहरुको धेरै संख्या रहेको सनफ्रान्सीस्को, न्युयोर्क, बाल्टिमोर, ह्युस्टन, सिकागो, डेन्भर, मियामी, न्यु ओरल्याण्ड लगायतका शहरमा आइसीइको गतिविधि तिब्र हुन सक्ने बताइएको छ । छपाका क्रममा कुनैपनि अवैध व्यक्तिहरुलाई नछोडिने आइसीइले जनाएको छ । युएससीआइएसका कार्यकारी निर्देशक केन कुसीनेलीले आइसीइको छापा अब कुनैपनि बहानामा नरोकिने जनाएका छन । नियन्त्रणमा लिइसकेपछि उनीहरुलाई राख्ने केही डिटेन्सन सेन्टरकोपनि व्यवस्था भइसकेको बताइएको छ । बालबालिकाको हकमा भने होटलको व्यवस्था गरिएको र उनीहरुलाई देश निकाला सम्बन्धी कागजात आएपछि सम्बन्धित देश पठाइने जनाएको छ । कतिपय अध्यागमन अधिकारीहरुले यसपटक आइसीइ गोप्य रणनीतिकासाथ अगाढि बढिरहेकोले धेरै पक्राउ पर्न सक्ने अनुमान गरेका छन । यसअघि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकी संसदमा अध्यागमन सम्बन्धित आसाइलम विधेयकमाथी पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै छापालाई स्थगित गरेका थिए । डेमोक्रयाटहरुलाई दुई साताको समयसम्ममा जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए । तर उनीहरुको जवाफ नआएपछि राष्ट्रपछि ट्रम्प आप्नो अडानमा अघि बढ्न थालेको बुझिएको छ ।
२६ असार २०७६, बिहीबार २३:३३ मा प्रकाशित